Caalamka, 06 June 2018
Arbaco 6 June 2018
Guatemala: Folkaano qarax cusub sameysay
Netanyahu oo madaxda Yurub kala shiraya Iran
Ra’iisul wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu ayaa maanta magaalada Paris kula kulmaya hogaamiyayaasha Faransiiska, isaga oo weli wada dadaal uu madaxda Yurub uga dhaadhicinayo in wax laga beddelo heshiiska Nuclear-ka Iran.
Mareykanka iyo Turkiga oo is-faham gaaray
Qarax lala beegsaday culimada Afghanistan
Ugu yaraan toddobada qof ayaa ku geeriyootay, sagaal kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax ismiidaamin ah oo maanta lagu qaaday kulan ay isugu yimaadeen culimada dalka Afghanistan, meel u dhow magaalada Kabul.
Netanyahu oo raadinaya cadaadiska Yurub ee Iran
Ra’iisul wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu ayaa maanta billaabay safar uu ku bixinayo saddex dal oo Yurub, isaga oo taageero u raadinaya in wax laga beddelo heshiiska nuclear-ka Iran.
Wareysi: Doorashada Ka Dhaceysa Canada
Gobolka Ontario ee dalka Canada waxa Khamiista ka dhic doonta doorashada gobolka, waana mid muhiimad ballaaran u leh Soomaalida Kanada maadaama ay gobolkaasi ugu badana yihiin
Canada: Soomaali loo dhiibayo Mareykanka
Maxkamad Canada ku taalla ayaa aqbashey codsi dowlada Mareykanka uga yimid oo ku saabsanaa in lagu soo wareejiyo wiil Soomaalida Canada ah.
Netanyahu oo ammaanay dadka Iran
Ra’iisul wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu ayaa baahiyey muuqaal uu ku ammaanayo dadka Iran, isaga oo isku dayaya inuu soo nooleeyo saaxiibtinimada taariikhiga ah ee dadka Iran, balse sidoo kale dhalleeceynaya hoggaamiyayaasha dalkaas.
ICRC oo dhaqaatiir u diraysa magaalada Gaza
Assad oo wada-hadal diyaar u ah
Milatariga Israel ayaa sheegay in diyaaradahooda dagaalka iyo kuwa qumaatiga u kaca ay duqeyn cusub xalay ku qaadeen bartilmaameedyo ay koxoda Xamas ku leedahay Marinka Gaza.
Kashmir: Pakistan iyo India oo heshiis gaaray
India iyo Pakistan ayaa maanta isku raacay in la dhaqan-geliyo heshiiskii xabad joojinta 2003 ee laga gaaray gobolka Kashmir, taasi oo soo geba gebeeneysa bilo isku dhacyo ah oo tobaneeyo qof ay ku dhinteen.